GRUB 2.11 ichave anotsiva kuna 2.06 uye anosvika mugore | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro chaiye akataura Ini handifarire kuverenga izwi GRUB zvakanyanya nekuda kwekurangarira kwakaipa kwandinako pandakatora nhanho dzangu dzekutanga muLinux, kunyange zviri pachena kuti hapana chikonzero chekutya. Mashoko ezuro akatitaurira nezve bootloader v2.06, yakasvika gore rakanonoka asi nekugadziriswa muBootHole, pakati pevamwe, uye nhasi inyaya zvakare, asi nechikonzero chakasiyana kwazvo. Mune izvo zvinoita sekushamisika, kana kwete kana isu tichifunga kuti neGNOME 40 yanga yave yakaipa, inotevera vhezheni ichave GRUB-2.11, uye kwete 2.07 sezvingave zvaitarisirwa.
Chikonzero icho chirongwa cheGNOME chakapa chekusvetuka kubva pa3.38 kusvika ku40 ndechekuti GTK yaizoshandisa ina mushanduro yayo yazvino, saka vakasarudza kusaunza nyonganiso ndokudana yazvino vhezheni yedesktop yavo (Shell nemaapps) GNOME 4. Zvino, ivo vanogadzira bootloader ndasarudza ita chimwe chinhu chakafanana, asi mune ino kesi kunzvenga zero kuruboshwe kwechikamu chedesimali.
GRUB 2.11 iri kuuya muna 2022
Tsiva shanduro dziri pakati pe2.07 na2.10 kudzivisa kutungamira mazero mune diki vhezheni nhamba. Nenzira iyi, vhezheni yekuongorora muzvinyorwa inofanirwa kuve nyore.
Izvo zvatove zvasimbiswa kuti muti wakavhurwa / kunyungudutswa kuti ugamuchire kodhi nyowani. Iye zvino vanofanirwa kuongorora zvese zvigamba zvakaunganidzwa mumwedzi mishoma yapfuura kuti vasarudze chekubatanidza. Iyo inotevera vhezheni yeGRUB inotarisirwa kubuda mu yekutanga hafu ya2022.
Pakati pezvinhu zvitsva zviri kukurukurwa uye zvinotarisirwa kusanganisira GRUB 2.11 isu tine Argon2 rutsigiro rweLUKS2, OSProber rutsigiro rweLUKS2, nevamwe. (U) EFI zvine chekuita nekuvandudza. Tichifunga kuti kuchine gore rekuenda kusvika kuburitswa kwakadzikama, panogona kunge paine shanduko dzakakosha, panguva iyo LxA ichaburitsa ruzivo rwese rwakabatana senguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GRUB 2.11 ichave anotsiva kuna 2.06 uye anosvika mugore
Yechipiri beta vhezheni yeApple 12 yakatoburitswa kare